Kooxda Liverpool Ayaa Sii Wadatay Jidka Guulaha Xili Roberto Firmino Iyo Jordan Henderson Ay Dhaliyeen Goolasha Guusha Ee Kooxda. | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Liverpool ayaa guul dahabi ah ka soo gaadhay kooxda dhibta badan ee Wolves waxayna Reds sii joogtaysay rekoodhka guuldaro la’aanta ee ay xili ciyaareedkan oo dhan kaga soo jirtay Premier league.
Liverpool ayaa talaabo wayn sare ugu qaaday ku guulaysiga koobka Premier league kadib markii ay ka soo gudubtay imtixaankii adkaa ee Wolves waxaana guushan Reds ku hogaamiyay Jordan Henderson iyo Roberto Firmino oo min hal gool dhaliyay.
Liverpool ayaa 67 dhibcood yeelatay iyada oo sii joogtaysay dhibcihii badnaa ee ay Manchester City oo kaalinta labaad ku jirta ay kaga saraysay waxayna kooxda Klopp soo xaqiijisatay in ay hadda si buuxda hal gacan ugu qabsatay koobka Premier league.
Liverpool ayaa jabisay rekoodhkii guuldaro la’aanta ee Chelsea ay 40 ka kulan ee xidhiidhka ah ee Premier league ku samaysay 2004/05 kii waxayna Reds hadda hiigsanaysaa rekoodhkii abid ugu fiicnaa ee ay Arsenal ku haysato 94 ka kulan ee guuldaro la’aanta ah.
Daqiiqadii 8.aad Kooxda Liverpool ayaa markiiba heshay goolka niyada ka xumeeyay kooxda martida loo ahaa ee Wolves waxaana gool madax ah u saxiixay kabtankooda Jordan Henderson oo dhaliyay goolkiisii labaad ee Premier League ee xili ciyaareedkan.
Si kastaba ha ahaatee, qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay Liverpool hogaanka ciyaarta ku haysay balse ayna Wolves quusan.
Daqiiqadii 51.aad Kooxda Wolves ayaa ugu danbayn ciyaarta ku soo laabtay waxaana gool qurux badan oo madax ah ciyaarta dib ugu soo celiyay Raúl Jiménez kaas oo difaaca Liverpool ka dhex qaatay kubbad uu soo karoosay Adama Traoré wuxuuna wax badbaadin ah u diiday Alisson.
Ciyaarta ayaa noqotay barbaro 1-1 ah iyada oo Wolves heshay fursadii ay doonaysay in ay ciyaarta ugu soo laabto.
Daqiiqadii 84.aad Roberto Firmino ayaa Liverpool u dhaliyay goolka ay dadaalka badan u soo sameeyeen wuxuuna darbo aan la joojin karin ku dhaliyay kubbad caawin uu ka helay Jordan Henderson waxayna ciyaartu noqotay 2-1 ay Reds hogaanka ku soo ceshatay.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-1 ay Liverpool guul xili ciyaareedkeeda muhiimad wayn ku leh kaga soo gaadhay Wolves iyada oo Reds yeelatay 67 dhibcood waana kulankii 23 aad oo ay guuldaro la’aan ku jiraan.